Kwalite njem nlegharị anya Caribbean n'agbanyeghị ọdachi ndị na-adịbeghị anya
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Njem azụmahịa » Kwalite njem nlegharị anya Caribbean n'agbanyeghị ọdachi ndị na-adịbeghị anya
Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Njem azụmahịa • Akụkọ Guyana • News • Safety • Tourism • Mmelite nke Njem njem • Akụkọ gbasara Trinidad na Tobago
Mgbalị mmekorita n'etiti ndị ọrụ njegharị si Guyana na Trinidad na-achọ ịdọrọ ndị njem nleta na mpaghara Caribbean n'agbanyeghị ọdachi ndị na-adịbeghị anya.
Otu ìgwè sitere na Los Exploradores nke Trinidad na Tobago nọ na Guyana na-arụ ọrụ n'akụkụ Rainforest Tours iji kwalite ebe abụọ ahụ dị ka ebe nkiri njem nleta.
Frank Singh, onye isi nchịkwa nke Rainforest Tours, kọwara ihe kpatara mmekọrịta a. “N’ezie anyị na-agba mbọ ịhụ etu ụlọ ọrụ abụọ a ga-esi rụkọ ọrụ ọnụ bụ maka ọdịmma eco-tourism ha na-anwa ịlele ngwaahịa anyị nwere maka njem na-adịghị anya na Kaieteur; anyị ga-aga Kaieteur echi. Anyị ga-elerịrị ya anya ma n'ọdịnihu, anyị ga-eziga ndị mmadụ Guyana ka ha mee njem njem na Kaieteur na nke ọzọ. ”
Ndị otu ahụ bụ Dominic Guevara na nwunye ya Elizabeth ga-anọ ụbọchị ole na ole na-esote na Guyana na-ele anya na atụmanya ebe a. Ha na-atụ anya ịdọta ọtụtụ ndị njem nleta maka nleta ha ọzọ. O kwuru, sị, "Ọtụtụ agwaetiti ndị dị na Caribbean Grenada Dominica… ugbu a, a na-ebibi ebe ndị ahụ… yabụ anyị chọrọ ịchekwa ndị njem nleta na mpaghara a," ka o kwuru.
Dominic Guevara na Ngalaba Ozi Ọha na eze na-ekwupụta na ọ chọrọ mgbe niile ịnweta mgbago na Kaieteur Falls. Ọ chọrọ na nnukwu uru ga-abịa site na mmekọrịta a.
Ka ọ dị ugbu a, Adrian Boodan, onye nta akụkọ si na Trinidad Guardian ga-eso ndị otu ahụ gaa njem ha. Ọ dụrụ ọdụ na mba ndị dị ka Guyana na Trinidad na Tobago kwesịrị ịkwalite onwe ha n'ahịa ndị njem nke Japan, Europe, na North America.
“Ọ bụrụ na ajọ ifufe a mere ka ndị njem pụọ na mpaghara a, na-asị na anyị achọghị ịbịa ebe a ọzọ. Ajọ Ifufe Irma, ụlọ na-etolite etolite, anyị enweghị ike ibi ụdị nke ahụ ọzọ. Anyị enweghị ike ịbụ onye njegharị n’ebe ndị a. Nke a bụ n'ihi na ọ maara ha otu ịga otu agwaetiti na Caribbean nwere ọtụtụ ihe. Ọ bụ ebe sara mbara. Anyị nwere Guyana, ọ bụ ezie na Guyana enweghị osimiri, ọ bụ ebe kachasị baa ọgaranya na gburugburu ebe obibi na njem na mpaghara niile ma ekwenyere m na a na-ere ahịa. "